कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले सक्षम नेतृत्व चयन गर्नेछ : सांसद डा.कार्की
यतिबेला विश्वभर कोरोना महामारीले सन्त्रास फैलिएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट २३ हजार बढी संक्रमित भइसकेका छन् । यहि बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन फागुनमै गर्नेगरी तल्लो तह को कार्यतालिका कांग्रेसले परिमाजर्न गरेको छ ।
यसैबीच कोभिड–१९ को सन्दर्भ र नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको तयारी के कस्तो भइरहेको छ भनेर न्यूज आजको लागि दिनेश लोहनीले नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सांसद डा.राजाराम कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, अनि सांसद पनि निकै व्यस्त हुनहुन्छ है ?
हजुर यस्तो सकंट अवस्था छ । व्यस्त नै भनौँ ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । कुनै पनि ठाउँमा यसले त्रास सिर्जना गरेको छ । हालसम्म यसबाट २ करोड बढी मानिसहरु संक्रमित भइसकेका छन् भने सात मानिस कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाे छ ।
यो एउटा ठूलो समस्या हो । यो एउटा भाइरस डिजीज हो । यसको लागि हालसम्म न कुनै भ्याक्सिन पत्ता लागेको छ, न कुनै औषधि ? यसबाट बच्ने उपाय भनेकै सामाजिक दुरी कायम गर्ने, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिने, मोस्ट अफ ट्रान्समिसन हुन नदिने, कुनै पनि मानिसले खोक्दा हाछ्यु गर्दा उसबाट किटाणुहरु आइरहेका हुन्छ्न् । ती किटाणुहरु केहि घण्टासम्म जिवित रहन्छन् । त्यसबाट पनि कोरोनाको जोखिम हुन सक्छ । त्यसबाट जोगिन उपाय भनेकै माक्स र सामाजिक दुरी कायम राख्ने र सतर्क हुने हो ।
अब आशा गरौं छिट्टै भ्याक्सिन तयार होस् । कुनैपनि ठूलो समस्या आउँदा त्यसको साथमा अवसर पनि आउँछ । त्यो अवसर भन्नाले यो समस्यासँग जुध्नको लागि विश्वभरको वैज्ञानिकहरुले विभिन्न खोज, अनुसन्धान, र अध्ययन गरेर आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यसको औषधि पत्ता लगाउने अवसर र चुनौती दुवै विश्वसामु छ ।
यसको औषधि र भ्याक्सिन चाडै पत्ता लाग्ने कुरामा म आशावादि छु ।
विश्व महामारीको समयमा पनि नेपाल सरकारको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यसलाई तपाईको पार्टीले कसरी हेरेकाे छ ?
सरकारको काम कारबाहीमा चित्त बुझेको छ भन्न पनि मिल्दैन । चित्त बुजेको छैन भन्न पनि मिल्दैन । शुरुमा सरकार चुकेपनि हाल आएर केहि हदसम्म सरकारले केहि काम गरेको छ भनेर भन्न पर्‍याे । तर समस्या यस्तो छ कि यस्तो बेलामा पनि सरकारले मेडिकल सामानमा अनियमितता गरेको कुरा एकदम दुखदायी भएको छ । सरकार यति बेला ‘सेन्स अफ जस्टिस’ मा हुनुपर्ने बेला अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई हतोत्साहित गरेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई जोगाउनु एकदमै दुःखद कुरा हो ।
तपाई र तपाईको पार्टीले यसको प्रभावकारी विरोध गर्न सक्नु भएन नि ?
तपाईहरु, सञ्चारमाध्यम, देश विदेशमा रहनु भएका सम्पुर्ण नेपालीहरुले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ । हाम्रो पार्टीलेपनि उठाइरहेको छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रदेशसभामा आवाज उठाइरहेको छु । यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टीले समिति नै बनाएर विभिन्न कोष स्थापना गरि सहयोग गरिरहेको छ । म र मेरो पार्टीले सकंटको बेला सरकारको विरोध भन्दापनि जनतालाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर सोचेको र लागेको चाँही पक्कै हो । यस्तो अनियमितताको लागी जनताले नै सजाय दिनेछन् भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
तपाईं प्रदेशसभा सांसद भएपछिको भूमिका कस्तो रह्यो ?
हेर्नुस् पार्टीको सबै केन्द्रीय कमिटीमा नेविसंघ, तरुण दलमा बसेर काम गरियो । सबै मिलेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ । पार्टी भन्दा राष्ट्र ठूलो हो, नेता पार्टी भन्दा ठूलो हुन सक्दैन । नेता जनताप्रति जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय हितमा सबैले काम गर्नुपर्छ, भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसले मैले प्रदेश सभामा जनताको हितमा रहेर काम गरेको छु । र यसको मुल्यांकन मैले भन्दा पनि आम नागरिकले हेरिरहेकोले यो प्रश्न आमनागरिकहरुलाई सोध्दा उचित हुने ठान्छु ।
हजुरको समाजसेवा र पेशालाई हेर्दा राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन भन्ने हो ?
हो, मेरो धारणामा राजनीति भनेको पेशा हैन । विशुद्ध समाजसेवा हो । हरेक राजनीतिज्ञले यसलाई समाजसेवाको रुपमा लिनुपर्छ । मेरो हकमा भन्नुहुन्छ, भने मैले वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल लगायतमा काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाए । मैले हालको समयमा पनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो भनौं, तीस हजार लाग्ने अप्रेशनलाई मैले दश हजारमा पनि अप्रेशन गरेर सेवा गरिरहेको हुन्छु । आफ्नो गुजारा चलाईरहेको छु । प्रदेशसभामा पनि मैले पाउने तलब विभिन्न स्कुल तथा गरिब बेसाहारा मानिसहरुलाई बाँडिरहेको हुन्छु । त्यसकारण राजनीति निस्वार्थ समाजसेवा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोभिड १९ ले देशमा ठूलो सकंट उत्पन्न भइरहेको छ, तपाई चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
हेर्नुस् सबै मानिसको लागी चौविस घण्टा हुन्छ । बैज्ञानिक अलेष्ट्राइनको लागी पनि चौविस घण्टा थियो । महात्मागान्धी, विपी कोईरालासँग पनि त्यहि चौविस घण्टा नै थियो । त्यसकारण समय भनेको व्यवस्थापन हो । मैले समयलाई कामको महत्वपूर्ण हेरेर छुट्याउने गर्दछु । म एम.वि.वि.एस पढ्दाखेरी फाइनल परीक्षा आउँदा जेल परे ।
पञ्चायत कालमा पाँच पटक जेल परेको छु । त्येतिबेला अर्थात् पाँच वर्षको समयमा मैले १३ वटा किताब लेखेको छु । त्यो किताब बेचेर, अनि एमविविएस को तयारी कक्षा संचालन गरेर कमाएको पैसाले मैले एमविविएस पास हुनेलाई गोल्ड मेडलको व्यवस्था गरे । त्यसकारण मैले त्यतिबेला त समयको व्यवस्थापन गरेर समाजसेवा गर्थे । अहिले त देश नै संकटमा छ यति बेला हामीले तन मन लगाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मनैदेखि समाजसेवा गर्ने साहस भएपछि समय व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईको वीपी कोईरालाको राजनीतिबाट प्रभावित भएको व्यक्ति । समाजसेवा पार्टीमा दिएको योगदान लगायतलाई मुल्यांकन गर्दा अहिले जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यो कम भयो जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
हैन समय आउँला । म समाज सेवा नै राजनीति हो, भनेर लागेको व्यक्ति हुँ । मलाई के लाग्छ भने जो यस देशमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नेहरु, उहाँहरु योग्य, सक्षम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । सबैलाई समान भावनाले हेर्ने, अदम्य साहस, भ्रष्टाचारको अन्त्य, गरेर राष्ट्रलाई निकास दिने खालको नेतृत्व होस् । म त्यति असन्तुष्टी भएको व्यक्ति पनि हैन । मलाई देश र जनताले जुन हैसियतमा राख्छन् म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी अगाडी बढ्ने व्यक्ति हो । मेरो लागी पद भन्दा सेवा ठूलो हो ।
नजिकिँदै गरेको महाधिवेशनले पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सक्षम नेतृत्व चयन होला भन्ने कुरामा तपाई कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु सक्षम छन्, बुझेका छन्, सबैले कामको मुल्यांकन गरेका छन् । खासगरेर नेतृत्वले बहुमतको कदर, अल्पमतको कदर र व्यक्तिको हैन विधिको शासन अवलम्वन गरेर पार्टीलाई अगाडी बढाउनु पर्छ, त्यसको लागि आम नेता तथा कार्यकर्ता सक्षम छन् । उनीहरुले सक्षम नेतृत्वनै चयन गर्नेछन् । यसमा कुनै दुईमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तपाईको पार्टी सभापतिले महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागलाई महाधिवेशनको मुखैमा धमाधम विभागहरु गठन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुभएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अब हेर्नुस् यो प्रश्न एकदमै सही छ । तर कतिपय सवालमा उहाँसँग पनि केही बाध्यता होला । बाहिरबाट निष्पक्ष रुपमा हेर्दा पार्टीको कुनै विभागपनि गठन नगर्दा कांग्रेसलाई ठूलो नोक्सान भएको छ । यसमै दुवै नेता बसेर समयमै टुंग्याउनुपर्ने हो ? तर यसमा दुवै नेताको विवाद हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसलाई एउटा पाठको रुपमा लिएर आगामी दिनमा यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म अहिले गठन गरेको विभाग र नेतृत्वको सवालमा भने पार्टी सभापति र नेताहरु बसेर सहमति गर्नुपर्छ ।
तपाईको पार्टीभित्र एकाथरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आगामी महाधिवेशनबाट पनि फेरि पुनः त्यो नेतृत्व दोहोरिएमा कांग्रेसलाई अब गाउँगाउँमा वत्तिबालेर खोज्नुपर्छ भन्छन् नी ?
यो कुरा पार्टीभित्र जोडदार रुपमा उठाउनुपर्छ तर, यो कुरा बाहिर–बाहिर उठाउने र भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा पार्टीको निर्वाचनमा भोट हाल्ने नेता, कार्यकर्तामा हुन आवश्यक छ । आजको २१ औँ शताब्दीको कांग्रेसहरुले निर्वाचनबाट नै यो कुराको छिनोफानो गर्नेछन् । बाहिर बसेर यो मान्छे ठिक, यो बेठिक भन्नु भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने लाग्छ ।
अहिलेको महाधिवेशनमा हजुरको स्थान चाँही कहाँ हुन्छ ?
यो कुरा आम कार्यकर्ताको हातमा छ । म तरुण दलको महासचिव थिए । नेविसंघमा आन्दोलको विभागियको संयोजक । महाराजगञ्ज क्याम्पसमा ईकाइको संयोजक भए । यो सबै कार्यकर्ताको हातमा भएको कुरा हो । यो भन्दा अगाडी म केन्द्रीय सदस्यमा उठिन । त्यो भन्दा अगाडी म १० भोटले हारे । त्यसैले यो सबै साथीहरुको निर्णय हो । म कांग्रेसको सामान्य सदस्य भएर समाजसेवा गर्ने उदेश्य हो । मलाई कुन तहमा लैजाने भन्ने कुरा कार्यकर्ताको हातमा भएको कुरा हो । त्यसैले मेरो यसमा कुनै प्रकारको गुनासोहरु छैन ।
अन्त्यमा, कोभिड–१९ को महामारीलाई आम नागरिक तथा सरकारले अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु के–के होलान् ?
एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यसको लागी हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ, भने अहिलेसम्म कोरोनाको लागी कुनै औषधि बनेको छैन । कुनै भ्याक्सिन बनेको छैन । यो कैले आउँछ थाहा छैन । हामी कुरा गर्दा गर्दै कति मानिस संक्रमित भएका होलान् । कति मानिसको मृत्यु भएको होला ? त्यसकारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसलाई फैलनबाट रोक्नु हो । त्यसको लागी हामीले बिशेष गरेर दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । एउटा खोक्दा हाछ्यु गर्दा मुखबाट स–साना किटाणुहरु निस्केका हुन्छन् । जसबाट भाईरसका हजारौँ लाखौँ किटाणुहरु निस्केका हुन्छन् । त्यस्ता निस्केको किटाणुहरु भाईरस सक्रंमित छन् भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरिहाल्छ । यसरी निस्किएको किटाणुहरु चौविस घण्टासम्म पनि जिवितै रहन्छन् । दोस्रो कुरा माक्स र सेनिटाईजरको हरदम प्रयोग गर्नुपर्दछ । जुन कुरा सबै मिडिया पत्रपत्रिकाहरुमा प्रशस्त मात्रामा प्रचार भइरहेको छ ।
खासगरी अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने डरले नागरिकन हिँड्डुल गरिरहेका छन् । सतर्क, सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल ५१ औँ वर्षमाः ‘संविधानत प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गराउन सक्रिय रहनेछौँ’विचार/अन्तरवार्ता |
निषेधाज्ञा खुलेपछि के गर्ने, के नगर्ने ? यस्तो छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझावविचार/अन्तरवार्ता |
'निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यी काम गरोस् 'विचार/अन्तरवार्ता |
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले सक्षम नेतृत्व चयन गर्नेछ : सांसद डा.कार्कीविचार/अन्तरवार्ता |
स्याङ्जामा पहिरोले घर परिँदा ८ जनाको मृत्यु, दुई जनाको सनाखत हुन बाँकी